Izinsizakalo zeWebhu zeSemalt
Uma ubukade ufuna i-SEO kanye nenkampani yokuhlaziya, ufike endaweni efanele. Ngabasebenzisi abangaphezu kwe-636,471 kanye namawebhusayithi ahlaziywe angama-1,472,583, amaSemalt anelisekile ngamakhasimende ngezibuyekezo ezizokhonjiswa. Kepha kubafundi bethu abasazwisisi kahle okushiwo yi-SEO nokuhlaziywa kwewebhu, kufanele unamathele nxazonke.
Uyemukelwa ku-Semalt, iwebhusayithi ehamba phambili ye-SEO kanye ne-analytics. Asiyona inkampani evamile yeMickey Mouse ehlose ukwenza imali yakho oyitholile kanzima. Esikhundleni salokho, siyisikhungo sedijithali esigcwele. Uthola futhi ukuhlangana nethimba lethu lamalungu anolwazi nawomsebenzi ochwepheshe.
Amalungu eqembu lethu yi-SEO kanye nomhlaziyi wewebhu ongumhlaziyi we-Web ohlala ekulungele ukubhekelela zonke izidingo zakho. Kufanele uzizwe ukhululekile ukuhlangana nabo futhi ukhulume nabo. Bayizisebenzi ezinethalente, ezisebenzayo nezishukumisayo ezinamaphrojekthi amaningi we-IT kuphothifoliyo yazo. Kufanele futhi uhlangane ne-turbo, uphawu lweSemalt, nesilwane sethu sasekhaya sefudu.
Uma namanje uzibuza ukuthi yini ngempela esiyenzayo, nansi incazelo.
I-Semalt inikeza izinsiza zewebhusayithi kanye ne-Analytics ukusiza ukukhiqiza nokuhola kumakhasimende ethu. Siyaqhubeka nokuhlaziya amawebhusayithi futhi siqinisekise ukuthi lezo ziholidi ziguqulelwa amaklayenti. Ngakho-ke yebo sikusiza wenze imali ngokuheha abathengi kumabhizinisi akho usebenzisa i-Intanethi.
Kumkhakha we-inthanethi, amaklayenti asizuze ngokusebenzisa i-SEO ajwayele ukusho izitatimende njengamadwala e-SEO !!! Futhi nakhu
Ukuqonda ukubaluleka kwe-SEO neWebhu Analytics
I-SEO imele ukwenziwa kweinjini zokucinga. Le yindlela enhle yokwenza okuqukethwe kwakho kuwebhu kubekwe nguGoogle. Izikhathi eziningi, abasebenzisi bakhangisa noma babhale okuqukethwe ku-inthanethi ngaphandle kokuqonda ukuthi kusebenza kanjani. Cabanga indawo yemakethe yabasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezine namawebhusayithi angaphezu kwezigidi eziyisi-1,5. Yebo, akuzona zonke lezi webhusayithi ezinikezela ngezinsizakalo ezifanayo, kodwa futhi azikho ezingafani. Noma yini ofuna ukuyenza, kunenye iwebhusayithi enikeza okuthile okufanayo. Ngakho-ke, ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho iyaqashelwa, sisebenzisa ama-SEO.
Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uya kanjani ku-Google ukusesha umkhiqizo noma isihloko, kepha uthola amakhasi wezimpendulo? Ngiyaqiniseka ukuthi unayo, awudingi ukuphendula lokho.
Noma kunjalo, iGoogle ihlela imiphumela yakho yokucinga ngokulandelana okuthile. Manje, lokho akuyona inhlanhla, umphumela we-SEO. Iningi labantu abasebenzisa i-inthanethi namuhla bathola impendulo yemibuzo abayibuzayo emiphumeleni emihlanu yokuqala yokusesha ekhonjiswayo. Lokhu kusho ukuthi abasebenzisi be-inthanethi abaze bavakashele eminye imiphumela engu-5-7 ekhasini lokuqala. Ngemuva kwalokho, cabanga ngemiphumela yokusesha ekhasini lesibili, noma lesithathu. Wake wafuna okuthile futhi kwadingeka uye ekhasini lesithathu? Lokhu kukhombisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukusebenzisa ama-SEOs.
Njengomnikazi webhizinisi noma iwebhusayithi, ufuna ukukhiqiza ithrafikhi enkulu ngangokunokwenzeka ngoba nje ukuchofoza okuningi kungenzeka kusho imali eningi (ngokungananazi). Ngakho-ke lapho iwebhusayithi yakho noma izinsizakalo zibonakala emiphumeleni emithathu yokuqala yokucinga, uyazi ukuthi kuyimali enkulu. Kungakho usidinga.
ISemalt ikubeka phezulu kwekhonkolo lokudla, uqala ukubonwa. Ukwenza lokhu, sisebenzisa amagama angukhiye kanye nokuhlaziywa kwewebhu okunzulu. Yize amagama angukhiye kungamagama omlingo we-inthanethi, usadinga ukuphathwa kwewebhu ukuze abasebenzisi bachofoze, bafunde, noma ba-oda. Lezi zinto zisiza i-Google, nezinye izinjini zokusesha ukuthola okuqukethwe kwakho ngokushesha uma noma yimuphi umsebenzisi esesha noma yini ehlobene nawe.
Ngakho-ke, uma umsebenzisi efuna ukuthi athenge kuphi izicathulo, i-Google ifuna ngokushesha amagama asemqoka kumawebhusayithi, kepha ngaphandle kwewebhusayithi efanelekile, abasebenzisi ngeke bakhathazeke ukuthenga esizeni sakho.
Nalu uhlu lwezinsizakalo zeSemalt
Lolu hlobo lwe-SEO luqinisekisa imiphumela emihle ngesikhathi esifushane. Le phakheji ye-SEO ngempela iyiphakethe lendlu eligcwele ibhizinisi lakho online.
Lokhu kukhulisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho
Uthola ukusebenza ekhasini
Sinikezela ngezixhumanisi zokwakha
Ucwaningo lwegama elingukhiye olubanzi
Imibiko yokuhlaziywa kwewebhu
Ukwenza i-webhusayithi emangalisa akuyona yonke into edingekayo ukukhiqiza ithrafikhi. Uma ungenalo ulwazi lokuthi ungayishayela kanjani endaweni ephezulu ku-Google, akunandaba. Ngentengo ka- $ 0,99 kuphela, uqala umkhankaso we-SEO okufaka inzuzo. Noma nje ngisaqala ekusebenzeni kahle kweinjini zokucinga, sikunikeza konke ozodinga ukukhuthaza iwebhusayithi yakho online. Sinikezela ngokufinyelela kule setha lezindlela ezimhlophe ze-SEO zamaphrojekthi akho. Noma, ungahambisa okuhlangenwe nakho okungcono kwamakhasimende wakho ngokunikeza izinsizakalo ze-SEO ngokususelwa kubuchwepheshe bethu obuhlukile. Vumela i-Auto SEO engabizi ikusebenzele futhi ikunikeze imiphumela esheshayo kanye nokusebenza kahle kwe-100%.
Lokhu kunikezwa ngubani?
I-Auto SEO ingazuzisa kubaphathi be-web, amabhizinisi amancane noma ama-Startups, izinkampani kanye nama-freelancers.
Le ndlela esezingeni eliphakeme ye-SEO yakhelwe impumelelo yebhizinisi lakho. Lokhu kukuyisa phezulu kwe-Google.
Le phakheji linikezela:
Ukulungiswa kwephutha lewebhusayithi
Ukusekelwa kanye nokubonisana
Inhloso yanoma yiliphi ibhizinisi kufanele ibe yiyona ehamba phambili. Cabanga inkampani yakho ivela ohlwini lwenkampani enkulu kakhulu iForbes. Ungawunaki umcabango; kungenzeka ngezinto ezintathu ezibalulekile zokuthengisa, inzuzo, kanye nokubambisana. Lezi zithako ezintathu ezibalulekile yilokho okudingayo ukuze usinde emhlabeni webhizinisi.
I-FullSEO izokusiza uhlanganise zonke izithako ezintathu, ikunikeze ukuqala kwekhanda ukuchuma. Amaqembu ethu ochwepheshe be-SEO athuthukisa futhi aqalise uhlelo oluthile lokusetshenziswa kweinjini zokucinga nokukhuthaza iwebhu okwenzelwe ngqo ukulingana nezidingo zebhizinisi lakho. Ngosizo lwethu, isiza sakho sebhizinisi ngeke sithathe ikhasi lokuqala kuphela kepha endaweni ephezulu ekusesheni kwe-Google. Noma nini lapho abantu bebheka noma yimuphi umkhiqizo ofana nalowo owunikezayo, sizowashayela kwisiza sakho.
Ngubani ozuzayo kuSemalt FullSEO?
Ngenkathi iphakethe lethu le-FullSEO lenzelwe ikakhulukazi amaphrojekthi webhizinisi ne-e-commerce, kuyasiza futhi kubanikazi bokuqalisa nabaphathi bewebhu kanye nosomabhizinisi abafisa ukwenza okungcono amawebhusayithi abo.
I-Semalt Web Analytics
Sihlaziya amawebhusayithi akho bese siwayisa kwabayi-10 abaphambili baka-Google ngesikhathi esifushane kakhulu. Ngokusebenzisa igama legama elingukhiye leSemalt kanye namamaki, uthola ukuhlala uqhubeka.
Sinikezela ngezinsizakalo ezifana:
Ihlola izinga lewebhusayithi yakho
Kwambula ukubonakala kwewebhusayithi yakho kuwebhu
Ihlola amawebhusayithi ancintisanayo
Khomba amaphutha wokusebenzisa ikhasi
Thola imibiko ebanzi yewebhusayithi ebanzi.
Kade uzama ukufinyelela phezulu, kodwa akusebenzi? Izithameli zakho eziqondisiwe azitholi iwebhusayithi yakho? Thola izimpendulo zale mibuzo ngokusebenzisa i-Semalt Web Analytics yethu YAMAHHALA yokuhlaziywa kwewebhusayithi nokuhlolwa kwakho. Isheke sethu segama elingukhiye lewebhu online sibonisa isikhundla sewebhusayithi yakho ku-Google SERPs. Ngemuva kwalokhu, siphakamisa amagama asemqoka azohamba izethameli zakho. Thola ukuthi yini abantu abafuna kakhulu bese ubatshela abakudingayo. Ngokubheka ukuncintisana kwakho, sithola izimfihlo zabo empumelelweni. Ngemuva kwalokho, siguqula futhi sisebenzise lolu lwazi olusha lokukhuthaza kwakho ku-inthanethi.
Ekugcineni, sikhipha imibiko yewebhu enemininingwane futhi sisize ukulungisa amaphutha esiwabonayo. Njengama-web gurus, sikusiza wena newebhusayithi yakho ukuba nicebe.
Ngubani ozuzayo kuSemalt Web Analytics?
Sincoma lokhu kuwo wonke umuntu ofuna ukuthola okuningi kumawebhusayithi abo. Abaphathi beWebhu, abanikazi bamabhizinisi abancane, izinkampani, ama-Startups, kanye nama-freelancers bangasebenzisa le nsiza.
Sakha amawebhusayithi amangalisayo kwanoma iyiphi imboni nomsebenzisi. Amasayithi esiwakhayo angaba yi-HQ yedijithali yayo yonke into eku-inthanethi, ezisukela ezinkampanini eziku-inthanethi, amabhizinisi azimele, kanye nezitolo, noma ama-studio wabadali, abaculi, bonke abanye abasebenzisi abanemibono emangalisayo abadinga ukuyithola kwi-inthanethi. Ungaqiniseka ngezinsizakalo zethu zobungcweti ukuthola ukunakwa okufanele.
Ukubukeka kwakho kuwebhusayithi kusho okuningi ngomkhiqizo wakho. Izithombe ezihehayo, imibala, kanye nemiklamo yendaba njengoba ukugqoka kwakho kwenza empilweni yangempela. Iwebhusayithi ekhangayo ingaba yisici esinqumayo sokuthi ngubani ohlala ukubuka okuqukethwe kumawebhusayithi akho.
Uhlelo lwethu lokuthuthukisa iwebhu lunikeza:
Idizayini ekhangayo neyisebenzayo
Ukuqalisa ukusebenzisa izisombululo ze-CMS
Ukuhlanganiswa kwe-plug kwe-Smooth ne-API
Ukusekelwa kanye nokugcinwa
Ngubani ozuzayo ezinhlelweni zeSemalt web Development?
Abaphathi beWebhu, abanikazi bamabhizinisi abancane, izinkampani, ama-Startups, kanye nama-freelancers kufanele bazizwe bekhululekile ukuthola lokhu.
Thatha izinto ezejwayelekile uzenze ezingajwayelekile. Sinikeza imibono yakho, impilo, ukunyakaza, izwi, kanye nesenzo.
Sithuthukisa imiqondo yakho
Sebenzisa izembozo zezwi zobungcweti
Musa nje ukutshela izibukeli ukuthi unikela ini, kukhombise. Ukuze ube ngaphambi komncintiswano wakho, udinga ukucabanga ngaphandle kwebhokisi. Yenza okuthile okukhulu kakhulu kunokucatshangelwa yimbangi yakho. Ngosizo lwethu, uzoba namavidiyo amahle kakhulu wokubambisana okungangabazeki ukuthi azohlaba umxhwele abathengi bakho abazoba. Sitshele imibono yakho futhi usibuke sikuguqulele kumavidiyo wokuphromotha ongawashicilela ukuze ujike izinkomba zakho kumakhasimende. Amavidiyo enza indlela ethokozisayo yokuxhumana nezinsizakalo zakho. Usho okuningi ngesikhathi esifushane futhi ubayeke bakhumbule umkhiqizo wakho njengoba behlanganyela amavidiyo wakho nabangane babo. Uthola ukujabulela ukumaketha kwamahhala ngenxa yamavidiyo encazelo yekhwalithi.
Ngolunye usuku, kwenzeka ngathi ukuthi okusize ibhizinisi lethu kungasebenzela abanye. Sikusiza ukuthi wakhe uphawu, futhi silukhuthaza kuwebhu. Siyazi ukuthi sonke sithanda ukwenza izinto eziningi zodwa, kepha imisebenzi ethile kufanele ishiyelwe ochwepheshe. Ake sikuthole imiphumela emangalisayo emsebenzini wethu. Ngeminyaka yokuhlangenwe nakho uthola ucezu oluhle lekhekhe ngaphandle kokubhekana nezinselele esabhekana nazo ukulungisa iresiphi yethu. Sizokwakha futhi sithuthukise isu lokukhuthaza amawebhusayithi akho kuwebhu.
Lokhu yilokho esikubiza ngokuthi yizinsizakalo zedijithali ezigcwele ngokugcwele.
Amakhasimende ethu ahlala anelisekile, futhi enza kahle ngokusishiya ngezindaba ezimangazayo zokuthi iwebhusayithi yawo, ebikade ingatholakali ndawo, manje ibalwa phakathi kwamasayithi aphezulu. Uma ufisa ukubona okuningi, la macala angatholakala lapha.
ISemalt ivulekele wonke umuntu, noma ngabe ukhuluma luphi ulimi. Abaphathi bethu bazothola ulimi olujwayelekile nawe. Ngemuva kwakho konke, sikhuluma izilimi ezinkulu njengesiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiTurkey nokunye okuningi.
Siyaqonda ukuthi ukufeza izinhloso zakho kungahle kuzwakale kancane. Kepha, ngosizo lwethu, awudingi ukuthwala umthwalo wedwa. Ochwepheshe bethu benza yonke le misebenzi enzima ibe lula. Ekugcineni, inhloso yethu ukuqinisekisa ukuthi awugculisi nje kuphela kepha nokuthi iwebhusayithi yakho isephezulu.
Kungani ungabhalisi nathi namuhla futhi ube yingxenye yeqembu eliholayo !!!